Toy ny mahazatra moa dia nomena hatrany mba hanatanterahana fifidianana madio, mangarahara ary eken’ny rehetra ireny fanomezana ireny kanefa toy ny efa teo aloha ihany dia tsy fantatra mazava foana ny tena lalan’ireny fitaovana ireny ary mbola miteraka adihevitra be foana ny tontolom-pifidianana eto amintsika hatramin’izao.
Tsy dia levon’ny vavonin’ireo mpankafy baolina kitra Malagasy ny eritreritra hanendry ho mpanazatra mpanampin’ny ekipam-pirenena ilay tekinisianina Malagasy, August Raux. Efa teo foana io, hoy ny fanamarihan’ireo mpitia kitra saingy tsy hita izay nataony.
Misy ny soso-kevitr’ireo mpitia kitra Malagasy ny amin’ny mba tokony hampianarana ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara ny hiram-pirenena. Tsy hifanomezan-tsiny moa fa saika nonina hatramin’ny kely sy nila ravinahitra tany andafy avokoa ireo mpilalao. Hanampiana azy ireo hiverina an-doharano, araka izany, izao fikasana izao.